April 15, 2019 Updated: July 14, 2019
Jordan the Wonder Dog စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၅၊ ဇွန် ၂၃၊ အင်္ဂါနေ့
Hi everybody!!! So, Jordan was runner up in the My Rescue Dog contest, which won $5,000 to Hope For Paws. Thank you to…
Jordan the Wonder Dog စာစုတင်ရာတွင် အသုံးပြုမှု ၂၀၁၅၊ အောက်တိုဘာ ၂၀၊ အင်္ဂါနေ့